Weather in Thailand tamin'ny Jolay ~ Journey-Assist - toetr'andro isam-bolana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Jolay
Weather in Thailand tamin'ny Jolay
Tamin'ny faramparan'ny fahavaratra dia mazàna ny vahoaka mando rivotra no mahatratra hatrany amin'ireo tanàna sy faritany avaratra indrindra; ny volana Jolay dia orana isan'andro. Na izany aza, noho ny onjam-peo dia tsy mila manafoana ny fialan-tsasatrao any amin'ny Fanjakana ianao ary manala ny tenanao amin'ny fahafinaretana betsaka, satria avy ny orana, na inona na inona faritra, amin'ny alina, ary amin'ny maraina dia afaka mandeha amin'ny tora-pasika ianao. Amin'izay fomba izay, ny mpizahatany amin'ny volana Jolay dia somary tsy mahita masoandro na fikapohana mahamay, satria ny ankamaroan'ny andro dia rakotry ny rahona matevina ny lanitra.
Ny monsoon atsimo andrefana dia mitondra ny hatsiaka efa ela niandrasana ny avaratry Thailande ary misy dikany lehibe, amin'ny alàlan'ny fenitra eo an-toerana, ny hatsiaka. Ny salanisan'ny rivotra isan'andro dia tsy mihoatra ny +30 degre, ary amin'ny alina dia mety hidina amin'ny +18 degre izy io, indrindra mandritra ny orana manaraka. Miova ny natiora ao anatin'ity vanim-potoana ity, tonga amin'ny fiainana aorian'ny hafanana amin'ny lohataona, manomboka mitombo ny zavamaniry.
Any amin'ireo faritany afovoany, ny faritra ivelan'i Ayutthaya sy eto an-drenivohitra, ny toetrandro dia tsy mitovy amin'ny any avaratry ny firenena. Ny mari-pana avo indrindra isan'andro amin'ny rano any Bangkok dia +32 degre, ary eo amin'ny morontsiraky ny Hoalan'i Thailand any Pattaya sahabo ho amin'ny +30. Tsara homarihina fa ny fampisehoana matetika dia manamora ny fahatsapan'ny toetr'andro manokana amin'ny fialan-tsasatra: rehefa avy ny orana dia mangatsiaka sy madio kokoa ny rivotra. Ny ranomasina eto amin'ity faritra ity koa dia mafana hatramin'ny +30 degre, rivo-doza miaraka amin'ny rivotra mahery matetika.
Na dia eo aza ny fisian'ny fanjakàna mando any amin'ny faritanin'i Thailand manontolo, ny habetsahan'ny orana any amoron-tsiraka amin'ny Hoalan'i Thailand dia somary ambany noho ny ao andrefana. Araka izany, eo amin'ny nosy Koh Samui ao anatin'ny iray volana dia misy orana 8 eo. Raha mandinika ianao fa ny fandroana matetika amin'ny alina, dia amin'ny volana Jolay, afaka mahazo aina tsara ianao amin'ity nosy ity na any amin'ny nosy mifanila amin'i Tao na Phangan. Ny mari-pana ny rano amin'ny torapasika dia +29 degre.
Ny faritra atsimo andrefana ao amin'ny firenena, ireo nosy Lanta, Phi Phi ary Phuket, Krabi dia mora kokoa amin'ny monsoon. Eto antenantenan'ny vanin-taona mafana, matetika rivo-mahery miaraka amin'ny onja avo, rivotra mahery, ary orana manidina isan'andro. Mahatratra +30 degre ny mari-pana amin'ny andro, ary mafana ny rano ao amin'ny ranomasina Andaman. Mazava ho azy, raha ny tetibolan'ny fizahantany no eo amin'ny toerana voalohany, dia amin'ny volana jolay dia mitombina ny mankany amin'ity faritra ity, satria 29-50% ny vidin'ny trano fisakafoanana. Na izany aza, raha ny olan'ny fitsidihana ny firenena dia tsy mifandraika fotsiny amin'ny vidin'ny ambiny, mendrika ny mandroso ny dia mankany Lanta na Phi Phi amin'ny fotoana iray hafa.
Endrika fitsaharana amin'ny volana Jolay
Raha manombatombana ny toetrandro tsy avy amin'ny fijerena ny mpanao vakansy, fa avy amin'ny mponina eo an-toerana, dia ny vanim-potoana mando dia lasa vanim-potoana mahavokatra be dia be: ny ahitra miroborobo amin'ny zaridaina tropikaly, ny famelomana aina aorian'ny fisian'ny orana, ny fijinjana ary somary milamina ao amin'ny firenena. Raha ny fahitana azy manokana dia ireo izay nahazo sy nanaiky ny tombony rehetra amin'ny vanim-potoana monsoon izay aleony miala sasatra any Thailand amin'ny Jolay. Vitsy ny mpizahatany toy izao, nefa izy ireo. Ny nosy any amin'ny Golfa any Thailand dia malaza indrindra, satria mety ho sarotra ny hahazoana any amin'ny nosy sasany any amin'ny faritanin'i Krabi noho ny oram-baratra tampoka.
Aza adino ny momba ny programa fialamboly tamin'ny Jolay. Any avaratra sy afovoan-firenena, maro ny fety voankazo, mitohy ny famoriam-bola lehibe amin'ny fararano fahavaratra. Ary ao amin'ny faritanin'i Ubon Ratchathani, dia atao isan-taona ny festival Candle malaza manerantany. Ny vahiny amin'ny fety dia afaka mankasitraka ireo diabe lehibe eny an-dalambe ao an-tanàna ary hihaino mozika eo an-toerana manokana.
Aiza kokoa ny miala sasatra any Thailandy amin'ny Jolay?
andro / alina
Andro orana /
32.0 ° C
10 andro (131.9 mm.)
16 andro (324.4 mm.)
7 andro (100.3 mm.)
9 andro (108.8 mm.)
31.0 ° C
11 andro (183.4 mm.)
16 andro (322.3 mm.)
17 andro (326.6 mm.)
8 andro (110.2 mm.)
16 andro (345.4 mm.)
17 andro (326.9 mm.)
16 andro (322.9 mm.)
27.0 ° C
23 andro (798.3 mm.)
18 andro (418.3 mm.)
11 andro (185.5 mm.)
13 andro (242.8 mm.)
11 andro (172.1 mm.)
23 andro (794.9 mm.)
19 andro (360.7 mm.)
9 andro (132.5 mm.)
22 andro (773.9 mm.)
12 andro (190.0 mm.)
8 andro (107.5 mm.)
9 andro (109.6 mm.)
Mia Khao Beach
17 andro (326.7 mm.)
Ao amoron-dranomasina Nai
Nai Young Beach
11 andro (121.3 mm.)
10 andro (135.8 mm.)
17 andro (327.1 mm.)
12 andro (187.0 mm.)
34.0 ° C
8 andro (93.4 mm.)
6 andro (97.6 mm.)
10 andro (134.0 mm.)
15 andro (277.6 mm.)
16 andro (307.9 mm.)
17 andro (283.9 mm.)
8 andro (104.8 mm.)
17 andro (344.2 mm.)
9 andro (117.3 mm.)
12 andro (125.3 mm.)
17 andro (325.9 mm.)
23 andro (804.6 mm.)
7 andro (92.9 mm.)
11 andro (134.6 mm.)
12 andro (137.6 mm.)
9 andro (108.7 mm.)
9 andro (121.3 mm.)
20 andro (240.0 mm.)
9 andro (109.8 mm.)
10 andro (114.4 mm.)